Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica Christmas-ka bisha Luulyo Dhacdada ayaa loo dejiyay 22-ka Luulyo
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Jamaica Christmas bisha Luulyo
Boqol iyo konton soo saare hadiyado shirkadeed oo maxali ah iyo alaabooyin xusuus ah ayaa ku soo bandhigi doona xulashooyinkooda kala duwan alaabooyinka ay ku soo bandhigi doonaan bandhigga 7aad ee bandhigga ganacsiga ee Jamaica "Christmas in July" Khamiista, Julaay 22, 2021, ee Jamaica Pegasus Hotel, New Kingston.
Tani waa dhacdo saxiix ah Shabakada Xiriirinta Dalxiiska, oo ah qeyb ka mid ah Sanduuqa Horumarinta Dalxiiska (TEF).
Bandhigga ganacsiga ee hal maalin ayaa noqon doona dhacdo isku dhafan (muuqaal iyo waji ka waji) si loogu hoggaansamo qawaaniinta COVID-19.
Dhacdooyinka sida Kirismaska ​​bisha Luulyo waxay bixiyaan taageero dhaqaale oo aad loogu baahan yahay ganacsiyada yaryar, kuwa yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Hindisaha sanadlaha ah wuxuu dhiirrigeliyaa iibsashada alaabada maxaliga ah ee dhabta ah ee daneeyayaasha qaybta dalxiiska iyo Jamaica shirkadaha raadinaya hadiyado macaamiisha iyo shaqaalaha. Waa dhacdo saxiix ah Shabakada Xiriirinta Dalxiiska, oo ah qeyb ka mid ah Sanduuqa Horumarinta Dalxiiska (TEF).
Si loogu hoggaansamo qawaaniinta COVID-19, sida sanadkii hore, bandhigga ganacsiga ee hal maalin wuxuu noqon doonaa dhacdo isku dhafan (muuqaal iyo waji ka waji). Iibsadayaasha bartilmaameedka ah ayaa lagu casuumay inay ku soo bandhigaan waxyaabaha lagu soo bandhigay goobta ganacsiga, halka dadka kale ee daneynaya ay toos uga daawan karaan Facebook: @tefjamaica iyo dalxiis; Instagram: @tefjamaica iyo YouTube: @TefJamaica iyo @MinistryOfTourismJA, laga bilaabo 2:00 pm ilaa 4:00 pm
Dhacdooyinka sida Kirismaska ​​ee bisha Luulyo waxay siisaa taageero dhaqaale oo aad loogu baahan yahay ganacsiyadayada yaryar, kuwa yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ahba, iyadoo sidaas la samaynayana, waxay hubinaysaa in Reer Jamaica waxay ka faa'iideystaan ​​dalxiiska. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay hadda maadaama qaar badan oo ka mid ah ganacsiyadaasi ay saameyn ba'an ku yeesheen CUDURKA-19 faafa waxayna u baahan yihiin dhammaan caawimaadda ay heli karaan si ay dusha uga sii socdaan, ”ayuu yiri Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett
Dhulgariir xoog badan ayaa ku dhuftay Jasiiradda Alaska
Geesigii ugu dambeeyay ee Dalxiiska ayaa ka dhiga Senegal mid ku faanta
WTM London waxay daaha ka rogtay Sacuudi Carabiya inay tahay Saaxiibka koowaad ee 2021